म केही गरौँ भन्ने भावना बोकेर निष्ठापूर्वक लागिरहेको छु – Health Post Nepal
२०७६ माघ ३ गते १३:४५
चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ कार्यकारणी समितिको निर्वाचनमा अध्यक्षमा उम्मेवारी दिनुभएको छ । चुनाव प्रचारका क्रममा देशभर घुम्नु भयो । चिकित्सकका समस्या के पाउनुभयो ?
मैले संघका रहेर झण्डै दश वर्षसम्म काम गर्दा देशभरका चिकित्सकका तमाम समस्यालाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएँ । पछिल्ला दिनमा देशभरका अग्रज एवं साथीहरुसँग भेटघाटका क्रममा मैले बुझेका कुराहरुलाई अझै संश्लेषण गर्ने अवसर मिल्यो । अहिलेको सन्दर्भमा चिकित्सहरूको प्रमुख समस्या सुरक्षाको नै रहेको छ । किनभने, काम गर्ने वातावरण छैन । वेला–वेलामा अस्पतालहरूमा तोडफोड र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि सांकेतिक हमला भइ नै रहेका छन् । यसले गर्दा काम गर्ने सहज वातावरण छैन ।
दोस्रो भनेको समयसापेक्ष तलबको कुरा प्रमुख रूपमा उठेको छ । राज्यले अध्ययनका लागि यति शुल्क भनेर तोक्ने त गरेको छ र बर्षेनि बढाइ पनि रहेको छ, तर चिकित्सकको तलबबारे स्पष्ट धारणा राखेको छैन । धेरै लामो समय र ठूलो लगानीमा अध्ययन गरेर डाक्टर बनेपछि दिनरात खटिँदा पनि तलबचाहिँ समयसापेक्ष नभएको सबै चिकित्सक साथीभाइको गुनासो छ । एमबिबिएस पढेका चिकित्सक थुप्रै आइरहेका छन्, तर पोस्टग्राजुएटको सिट कम भइरहेको छ । यसले गर्दा अन्डर ग्राजुएट र पोस्ट ग्राजुएटबीचको खाडल धेरै भइरहेकोलगायत थुप्रै मुद्दा छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघले बितेको कार्यकालको ३ वर्षमा गरेका कामप्रति चिकित्सकमा राम्रै सन्तुष्टि देखिन्छ । किनभने, यसबीचमा एनएमएले उठाएका मुद्दाहरू निकै महत्त्वपूर्ण थिए, जसमा हामीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका रहेछौ भन्ने अभास मलाई चिकित्सकहरुसँगको भेटबाट भयो । हामीले मुलुकी ऐनमा आमचिकित्सकको पक्षमा अडान, डाक्टरहरूलाई भ्याटबाट हटाउनु, नयाँ भवन निर्माण, सोसाइटीहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउनुलगायत अन्य थुप्रै काम गर्यौँ । त्यसैगरी, जुनियर डाक्टरहरूलाई एउटै संस्थामा ल्याउनका लागि जुनियर कमिटीको गठन गरियो । अनुसन्धानतर्फ सयभन्दा बढी काम उपत्यकामा र उपत्यकाबाहिर गरियो । देशैभरका चिकित्सक साथीहरूले अहिलेको कार्यसमितिले गरेका कामको प्रशंसा गर्नुभएको छ ।
हाम्रो कार्यसमितिले अघि सारेका डाक्टरका कतिपय मुद्दा केही मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेका छन् भने केही अर्थ मन्त्रालयमा गएर अड्किएका छन् । यस्ता अधुरा कामलाई नयाँ कार्यसमितिमा आएसँगै पूरा गर्नेछौँ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
तपाईंले जित्ने आधार के छन् ?
डाक्टरहरू आफ्नो बुद्धिवेवकले काम गर्छन् । उनीहरूले मूल्यांकन गर्ने भनेको २ वटा कुराले हो । ३ वर्षमा हालको कार्यसमितिले के–के काम गर्यो त्यो एउटा पक्ष भयो । अर्को भनेको अब आउने टिम कस्तो छ र त्यसले काम गर्न सक्ला वा नसक्ला भन्ने विश्लेषण हो ।
हामीले ३ वर्षको कार्यकालमा थुप्रै काम गरेर देखाइसकेका छौँ । मुलुकी ऐन चिकित्सकहरूको घाँटीको तरबारका रूपमा आइरहेको अवस्थामा अन्य प्रोफेसनल संगठनले गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले डाक्टरहरूलाई साहस दिने काम गरेका छौँ । कुनै पनि घटना घटेको खण्डमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षतामा बनेको ५ जनाको कमिटीको छानबिनको रिपोर्टअनुसार दोषी पाइए मात्र कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । यसबाहेक डाक्टरहरूलाई भ्याटको नाममा १३ प्रतिशत जोडेर असजिलो पार्ने कोसिस गरिएको थियो, जुन निर्णय हाम्रै दबाबमा हटाइयो । संघको आफ्नै भवन बनाएर सम्पूर्ण सोसाइटीलाई एकैठाउँमा ल्याइयो । यी सबै कुराले हाम्रो टिमलाई काम गर्ने रूपमा प्रमाणित गरेका छन् ।
३ वर्षमा संघका काम प्रशस्त देखिन्छन् । चाहे डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा होस्, चाहे मुलुकी ऐनको इभेन्टमा या कुनै घटना घटेको विषयमा नै होस्, संघले खेलेको भूमिकाको सम्पूर्ण चिकित्सकले मूल्यांकन गर्नुभएको छ । संघले काम गरेकैले म महासचिव हुँदा ६ हजार सदस्य रहेकोमा आज संघका सदस्य संख्या झन्डै १२ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । यसरी छोटो अवधिमा सदस्यता दोब्बरले वृद्धि हुनुले संघप्रति चिकित्सकको आकर्षण बढ्दै गएको र उनीहरूले यसको आवश्यकता बुझेको देखाउँछ । संगठन विभागको प्रमुखको नाता संघको सदस्यतामा भएको बृद्धिले पनि मेरो सक्रियता देखाउँछ होला ।
हामीले उठाएका मुद्दा कुनै समूहविशेषका नभएर सबैका साझा छन् । कुनै घटना घट्दा यो कांग्रेस, त्यो कम्युनिस्ट अथवा यो या त्यो पार्टी नभनीकन काम गर्दै आएका छौँ र गरिरहन्छौँ । मुलुकी ऐन आउँदा कांग्रेस जेल जाने कम्युनिस्ट नजाने, तलब बढ्दा कम्युनिस्टको बढ्ने कांग्रेसको नबढ्ने, भ्याट हट्दा कांग्रेसको हट्ने कम्युनिस्टको नहट्ने हुँदैनन् ।
आगामी दिनमा काम गर्नका लागि भनेर हामीले अहिलेको टिम सबै हिसाबले चुस्त–दुरुस्त र दह्रो बनाएका छौँ । हाम्रो टिममा अधिकांश साथीहरु ४० वर्षभन्दा मुनिको हुनुहुनेछ । सरकारी, गैरसरकारी, उत्यकाभित्र र बाहिरका, विभिन्न सोसाइटीका डाक्टरलाई समेटेर सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी र सबैले अपनत्व लिन सक्ने गरी टिम बनाएका छौँ । ३ वर्षको अवधिमा हामीले कति काम पूरा गर्यौँ र कति गर्न बाँकी छन्, त्यसको फेहरिस्तसहित विस्तृत प्रतिबद्धता लिएर मतदातामाझ गएका छौँ । चिकित्सकका सबै समस्या यो टिमले बुझेको छ र समाधान गर्ने क्षमता राख्छ । यो नै हाम्रो टिमको जितको आधार हो ।
तपाईंसित चिकित्सकको मन जित्ने नयाँ एजेन्डा के छन् ?
आधारभूत कुराहरू जोसुकै आए पनि त्यही नै हुन्, सुरक्षा, तलब, अन्डर ग्राजुएट र पोस्ट ग्राजुएटबीचको खाडलजस्ता विषय साझा समस्या हुन् । यीबाहेक हामीले जुनियर डाक्टरलाई आकर्षण गर्न एनएमएलाई एउटा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छौँ । यसअन्तर्गत हामी अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू विकास गरेर काम गर्न चाहन्छौँ । एनएमएकै संलग्नतामा म्युजियम बनाउने उद्देश्य छ । नेपालमा पहिलोपटक इसिजी कसले गरेको थियो, पहिलो प्रेस्क्रिप्सन कस्तो थियो होला, यस्ता विषय सबैको कौतुहल र अनुसन्धानको समेत विषय हुन् । यी चिजलाई समेटेर संग्रहालय बनाउने योजना छ ।
मन्त्रालयका पदाधिकारी, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीलगायत अन्य मानिस बसेर नेपालको स्वास्थ्य कस्तो छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा विमर्श गरी यी सबै चिजलाई होलिस्टिक भिजनबाट अगाडि बढाउनेछौँ । कानुन परिवर्तन भएर मात्र बिरामी र डाक्टरको सम्बन्ध सुमधुर हुँदैन, न त डाक्टर नै सुरक्षित हुन्छन् । बिरामी र डाक्टरको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन कार्यक्रम विस्तार गरेर नेपालमा नेसनल गाइडलाइन नभएको अवस्थामा सोइसाइटीसँग मिलेर गाइडलाइन बनाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि अघि बढिरहेका छौँ ।
निर्वाचनमा तपाईंको प्रतिस्पर्धी चिकित्सक समूहले संघ साझा संस्था बन्न सकिरहेको छैन, राजनीतिक दलनिकट चिकित्सकको गुटजस्तो बनेको छ भनिरहेको छ । यो आरोपमा सत्यता छ ?
यो निराधार आरोप हो । हरेक २ वर्षमा पहिले पनि चुनाव हुन्थ्यो र अहिले ३–३ वर्षमा भइहरेको छ । हामी निर्वाचनमार्फत सदस्य चिकित्सकहरूको मतकै आधारमा कार्यसमितिमा आएका हौँ । त्यसकारण यो व्यवस्थालाई सिन्डिकेट भन्नु पूरै गतल हो र लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै अनविश्वास गर्नु हो । यदि हामीले विनानिर्वाचन ७० वर्षदेखि राज गरेको भए एउटा कुरा, विधानतः निर्वाचन प्रक्रियामार्फत चिकित्सकको मन जितेर आउने प्रक्रियालाई सिन्डिकेट भन्न मिल्दैन । हाम्रो कामका आधारमा चिकित्सकले विश्वास गरेरै हामीलाई कार्यकारिणीमा पुर्याएका हुन् । र, हामीले नेतृत्व गरिरहँदा यो र त्यो नभनीकन सबै सदस्यलाई समान व्यवहार गरेकै कारणले पनि सबैको सधैँको साथ पाइरहेका हौँ । त्यसकारण सबैलाई समेटेन भन्नु गलत हो ।
हामीले उठाएका मुद्दा कुनै समूहविशेषका नभएर सबैका साझा छन् । कुनै घटना घट्दा यो कांग्रेस, त्यो कम्युनिस्ट अथवा यो या त्यो पार्टी नभनीकन काम गर्दै आएका छौँ र गरिरहन्छौँ । मुलुकी ऐन आउँदा कांग्रेस जेल जाने कम्युनिस्ट नजाने, तलब बढ्दा कम्युनिस्टको बढ्ने कांग्रेसको नबढ्ने, भ्याट हट्दा कांग्रेसको हट्ने कम्युनिस्टको नहट्ने हुँदैनन् । यो संघ पेसागत संगठन हो । चिकित्सकीय पेसामा रहेका जोकोहीलाई अप्ठ्यारो पर्दा कुनै दल वा राजनीतिक विचारधाराभन्दा बाहिर बसेर विशुद्ध पेसागत हकहितमा काम गर्छौं । तीन–तीन वर्षमा चुनाव हुन्छ, नराम्रा काम आउट हुन्छन्, सही काम गर्नेले मौका पाउँछ । त्यसकारण एकलौटी गरेको भन्ने जेजस्ता अभिव्यक्ति छन्, ती सबै गलत छन् ।
तपाईं अहिलेको कार्यकालमा महासचिवजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, यसअघि पनि दशकभन्दा लामो समय केन्द्रीय कार्यकारिणीमा रहेर काम गरिसक्नुभएको छ । यति लामो समय नेतृत्व तहमै रहेर के गर्न सक्नुभएन र फेरि अध्यक्षका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिनुभयो ?
सबै पदका आ–आफ्नै सीमितता हुन्छन् । कुनै पनि व्यक्तिले एकैपटक आएर अध्यक्ष चलाउन सक्ने क्षमता राख्दैन । म सदस्य भएर आउँदा मेरा केही सीमितता थिए र त्यही भूमिकामा रहेर मैले काम गरेँ । संघमा सहसचिव भएर काम गर्दा मैले प्रवक्ताका रूपमा काम गरेँ । त्यसपछि मैले महासचिवका रूपमा विधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर काम गरेको छु । अहिले म अध्यक्षको भूमिकाका लागि चुनावी मैदानमा किन छु भने महासचिव रहँदाका अधुरा काम पूरा गर्न र संघलाई कुशल नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता ममा विकास भइसकेको छ । अध्यक्षमा चुनिएलगत्तै संघका जिम्मेवारी वहन गर्न मैले एक मिनेट पनि खर्च गर्नुपर्नेछैन । समस्या के छन्, समाधान के हो, दिशा कुन हो, अधुरा काम कहाँ–कहाँ अड्किएका छन् र तिनलाई पूरा गर्न संघले कस्तो पहलकदमी लिनुपर्छ, कोसित कुन रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु, जुन मैले लामो समय नेतृत्व तहमा बसेर आर्जन गरेको छु ।
विभिन्न भूमिकामा १० वर्ष संघमा प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध रहेर काम गरिसकेको हुनाले अध्यक्षका लागि म सक्षम र योग्य छु भन्न सक्छु । संघमा काम गरेबापत कुनै पारिश्रमिक पाइँदैन । १० वर्ष संघमा आबद्ध भएर निरन्तर खटिनु एककिसिमले बलिदान नै हो । म संस्थालाई केही योगदान गर्न आएको हुँ । कतिजनाले सदस्य भएर छोड्नुभयो होला, कतिजना महासचिव भएर छोड्नुभयो होला । तर, म एक दशकदेखि निरन्तर संस्थाप्रति समर्पित छु, किनकि म संस्थालाई केही योगदान गर्न चाहन्छु । त्यसैले सदस्य, सहसचिव, महासचिव हुँदै अब अध्यक्षका लागि दाबी गरिरहेको छु । म केही गरौँ भन्ने भावना बोकेर निष्ठापूर्वक लागिरहेको छु ।
प्यानलै बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएको छ । प्रतिस्पर्धामा पनि प्यानलै खडा छ । आफ्नो जितको आधार त बताउनुभयो, पूरै टिमलाई जिताउने आधार के छ तपाईंसँग ?
यो नेपाल चिकित्सक संघको चुनाव हो । काउन्सिल भनेको व्यक्ति उठ्ने हो, तर संघभित्र विभिन्न पद छन् । संगठन चलाउनका लागि तलदेखि माथिल्लो तहसम्म टिम मिल्यो भने मात्र काम गर्न सहज हुन्छ । जसरी एउटा सरकारमा विभिन्न दलको खिचडी भयो भने देश चलाउन गाह्रो हुन्छ, त्यसैगरी संघमा पनि एउटै सोच, भिजन र ऊर्जा भएका व्यक्ति निर्वाचित भएको खण्डमा मात्र सार्थक परिणाम दिन सकिन्छ ।
हामीले ३ वर्षको कार्यकालमा थुप्रै काम गरेर देखाइसकेका छौँ । मुलुकी ऐन चिकित्सकहरूको घाँटीको तरबारका रूपमा आइरहेको अवस्थामा अन्य प्रोफेसनल संगठनले गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले डाक्टरहरूलाई साहस दिने काम गरेका छौँ । कुनै पनि घटना घटेको खण्डमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षतामा बनेको ५ जनाको कमिटीको छानबिनको रिपोर्टअनुसार दोषी पाइए मात्र कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।
हाम्रो टिममा ३–४ जना पुराना अनुभवी अनुहार र ४–५ जना नयाँ अनुहार हुुनुहुन्छ । जुनियर डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ । सबैतिर समेट्ने गरी बलियो टिम बनाएका छौँ । सबै चिकित्सकले आफ्नोपन महसुस गर्न सक्ने गरी टिम उतारेका छौँ । टिम नै निर्वाचित भएको खण्डमा हामीले अघि सारेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छौँ ।
डाक्टरी पेसा आफैँमा व्यस्त हुन्छ । व्यस्तताका बीच चिकित्सकले भोट हाल्नका लागि किन समय छुट्याउने ? मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउन तपाईंको सन्देश ?
भोटरलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले भोट नहाल्दा वा सही नेतृत्व दिन नसक्ने मानिसलाई भोट दिँदा ३ वर्षसम्म तपाईं असुरक्षित हुुनुहुनेछ । सही नेतृत्वको छनोट गरेर भोट दिँदा तपाईं ढुक्कका साथ पेसागत अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको हकअधिकारका लागि बोलिदिने मान्छे नेतृत्व तहमा पुग्छ । तर, भोट नहालेको खण्डमा वा सही प्रत्याशीलाई भोट नदिएको अवस्थामा त्रासमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण आफ्नो पेसालाई सुरिक्षत बनाउन, आफ्नो समस्यामा सरकार वा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग लडिदिनका लागि पनि आफू व्यस्त भए पनि एकदिन, एकछिन समय मिलाएर भोट हालिदिएको खण्डमा बाँकी ३ वर्ष निश्चिन्त भएर काम गर्ने वातावरण बन्छ ।
डाक्टरहरू व्यस्त हुन्छन् भनेरै उपत्यकाबाहिर २ दिन, उपत्यकाभित्र ६० प्रतिशतभन्दा बढी डाक्टर भएको हुनाले ५ दिन भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । कोही पनि मताधिकारबाट वञ्चित नहोऊन् भनेरै ५ दिन राखेका हौँ । त्यसभित्रको अवधिमा एकछिन समय निकालेर भोट हालेर सही नेतृत्व चुनिदिनुहुन आग्रह गर्छु ।
अन्तमा मतदातासँग केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
संघको ७० वर्षको इतिहास छ । डाक्टरहरूको संस्था हो । सरकारले हेर्ने नजर पनि पृथक् रहेको छ । त्यसकारण यो संस्थालाई राजनीतिकरण नगरेर पेसागत संगठनका रूपमा सम्पूर्ण डाक्टरले नेतृत्वमा कस्तो मान्छे जाँदा ठिक हुन्छ भनेर मनन गर्नुपर्छ । तपाईंहरूको अनलाइनमार्फत पनि पाठकसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु–हाम्रो पेसामा थुप्रै समस्या छन् । तिनको समाधानका लागि हाम्रो बलियो टिम भएको हुँदा विशुद्ध पेसागत टिम सम्झेर मतदान गरिदिनुहुन अनुरोध गर्छु ।
(लोकतान्त्रिक तथा पेसागत समूहबाट डा. कार्की नेपाल चिकित्सक संघ अध्यक्ष पदका उमेदवारी दिएका छन् । )
(हेल्थपपोस्टकर्मी पुष्पराज चौलागाईंसितको कुराकानीमा आधारित)